News Collection: चुलबुल पाण्डेको अङ्गालोमा नन्दिता !
चुलबुल पाण्डेको अङ्गालोमा नन्दिता !
सेटबाट फर्किएपछि स्न्यापहरु सोसल साइट फेसबुकमा अपलोड गर्नु हिरोइन नन्दिता केसीको न्यूइयर तालिका नै बन्यो । घुमघाम र अफविट फोटोहरु साइटमा राखेर कमेन्टहरु बटुल्ने शौख पालेकी डिम्पल गर्लले यसपटक भने सुटिङ भैरहेको सिनेमाको स्टिलहरु धमाधम फेसबुकमा छरिदिइन् ।
जुन स्टिलहरुमा नन्दिता नेपाली चुलबुल पाण्डे बनेका हिरो कर्मसँग अनस्क्रिन रोमान्स गरिरहेको पोजमा छिन् । नहुन् पनि किन ? प्रोजेक्ट सुरु नहुँदै कर्मसँग नन्दिताको फ्रेसपेयर हल्लीखल्ली मिडियाले गरेपछि नन्दिता ती तस्विरहरुलाई सेटमा मात्र सीमित राख्न चाहन्नथिन् ।
चुलबुल पाण्डेको अपोजिटमा आफ्नो केमेष्ट्री खुबै जमेको प्रतिक्रीया पाइरहेकी नन्दिता खुशिलाई सबैसँग बाँड्न चाहन्छिन् । 'सुटिङ निकै राम्रो भैरहेको छ' भन्छिन् 'कर्मसँग काम गर्न निकै सजिलो र सुखद भैरहेको छ ।' कर्म पुलिस अधिकारीको भूमिकामा कत्तिको जमेका छन् उनी स्वयमलाई भन्दा नन्दितालाई थाहा छ र प्रशंसा पनि उत्तिकै गर्छिन् ।
प्रशंसकहरुले जोडी निकै सुहाएको कमेन्ट गर्न थालेपछि चुलबुल पनि मस्त छन् । उनले नन्दिताको बखान गर्न चुकेनन् । भने -नन्दिता निके मिलनसार । मायालु पनि ।' चुलबुलले नन्दिताको प्रशंसा गर्नु र नन्दिताले चुलबुलसँग रोमान्सको स्न्याप धमाधम पोस्ट गर्नुको अर्थ के ? प्रशसकहरु यो केमेष्ट्रीभित्रको राज जान्न चाहन्छन् ।